MADAXWEYNE XASAN: Somaliland fikir ahaan Qayb ayay ka tahay Howlaha ka socda Dalka |
MADAXWEYNE XASAN: Somaliland fikir ahaan Qayb ayay ka tahay Howlaha ka socda Dalka
generic sildenafil, generic clomid. Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Maamulka Somaliland uu Qayb ka yahay Qorshaha looga Wada-tashanayo Aayaha Siyaasadda Somalia, isagoo xusay in meel fiican ay marayaan wadahadaladii horay u socday.
Xasan Sheekh ayaa Sheegay in Fikir ahaan Somaliland ay Howshan billaabatay Qayb ka tahay, wuxuuna tilmaamay sida duruufaha ugu ogolaadaan ay uga mid noqon doonaan.
“Wadatashiga billowday waan u dhannahay waana wax ay Soomaalidu leedahay, Dabcan Walaalaheen Somaliland mabda’a ahaan waa ka mid howshan. Hadaba, wixii fursad ah ee aan u helno ayay uga mid noqonayaan iyo sidii ay noogo aq-bali lahayeen ka qayb-qaada-shadooda,” ayuu ayuu yiri Xasan Sheekh.
Sidoo kale, Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh ayaa soo hadal Qaaday Wahadalladii horay ugu dhexeeyay Somaliland iyo Dowladda Somalia wuxuuna xusay in meel fiican ay marayaan, isla markaana hada loo gudbayo waji cusub.
“Meel wanaagsan ayay marayaan wadahadalladii hadda ayay waji cusub u gudbi doonaan, balse wadahadalka hadda socda mar walba waxaan diyaar u nahay in aan kawada shaqeyno wixii Shacabka Soomaalida dan u ah,” ayuu mar kale yiri Madaxweyne Xasan.
Dhanka kale Madaxweynaha Somalia oo ka hadlayay muranka hada ka dhex-jira dowladda Federaalka iyo Maamul-goboleedyada dalka ayaa xusay in wax-yaabaha Qaar la isla fahmi waayo ay dib u dhiganayaan, ayna xilli kale kawada hadli doonaan.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in shirka wadatashiga ah ee ka furmay Muqdisho uu qof kasta oo Soomaali ah looga baahan yahay inuu fikirkiisa iyo taladiisa ku daro, haddii mid fiican uu noqdana la qaadan doono.
Ugu dambeyn, Maamullada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka baxay Shirka, Kaddib Markii sheegeen inaysan raalli ka ahayn ka qaybgalka shirka uu ka Qayb-galayo Madaxweynaha Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ay sheegeen inaysan aqoonsanayn.